Bandhiga Caalamiga ah Buugaagta Hargeysa oo furmi doona Jimcaha berri isha Allah. | Salaan Media
Bandhiga Caalamiga ah Buugaagta Hargeysa oo furmi doona Jimcaha berri isha Allah.
mid ah horumarinta dhaqanka akhrinta iyo qoridda ee dalka ka jirta, iyo soo bandhigidda buugagga qoreyaasha dalka iyo adduunka kaleba, ku-dhiirrigelinta dadweynaha in ay u daawasho yimaaddaan oo akhriyaan buugaagta lana kulmaan oo la sheekaystaan qoreyaasha iyo fannaaniinta. Himiladu waa in ay dadka dhallinta ahi helaan dhaxal aqooneed oo maskaxdooda ku baraarujiya noolaynta qaababka halabuurnimo ee uu aadamigu isku cabbiro, sida sawir-gacmeedka, maanso-tirinta, sheeko-marinta iyo curinta sheeko-masraxeedda.
Bandhigga caalamiga ee Buugaagta Hargeysa waxaa sharaf u ah in uu martigeliyo, waxqabadkoodana dadka soo hordhigo qoreyaal, warfidiyeenno, hal-abuurro, culimo, fikireyaal madaxbannaan iyo fannaaniin heer caalami ah, iyo shakhsiyado dawlado ka socda iyo diblomaasiyiin. Sannadkii kan ka horreeyey waxaa sharaf noo ahayd in aanu soo dhaweyno Nadiifa Maxamed oo ah curiyaha buugga sida weyn loo qiimeeyey ee ?Black Mamba Boy?; iyo Mary Harper oo ka tirsan BBC, qortayna buugga ?Getting Somalia Wrong?; Dr Georgi Kapchits, af-yaqaan ku xeeldheer aqoonta afsoomaaliga; Saciid Saalax oo ah macallin iyo curiye maansada heesaha soomaaliyeed; Matt Baugh oo ah Danjiraha Ingiriiska u fadhiyey markaa Soomaaliya, madaxa DFID Soomaaliya Joana Reid, madax ka socotey safaaradda ay UK ku leedahay Itoobbiya, ee Somaliland na qaabilsan; Maxamud Sheekh Dalmar, aqoonyahan ku xeeldheer diinta islaamka ahna warfidiyeen la yaqaanno; Helen Conford oo ka tirsan shirkada buug-faafinta ee Penguin; Evan Christopher oo ah hoobal jazka tuma iyo marti kale. Sannadkan waxaa na farxad-gelinaya soojiidashada mudanka maansoyahannada iyo maalgeliyeyaassha oo isa soo taray marka loo eego sannadkii hore. Martida sannadkan iyo buugaagta cusub ee lasoo bandhigi doonnaa waxay ku taxan yihiin barmaamijka sannadkan ee qoraallada danbe ku xusan.